Sary heverina ho famolavolana vaovao an'ny AirPods 3 mamoaka | Vaovao IPhone
Alex Vicente | | Fitaovana IPhone, Apple products
Misy tsaho vitsivitsy momba ny a maodely vaovao an'ny AirPods izay nipoitra tato ho ato tao amin'ny Internet. Toa izao dia manana porofo iray hafa isika fa Apple dia miasa amin'ny maodely nohavaozina ny fitaovany tena tariby malaza indrindra, ny AirPods. Ny medium 52audio dia nizara sary (izay hitanao eo am-piandohan'ity lahatsoratra ity) izay manondro ho isan'ny AirPods 3 vaovao. Ny zava-drehetra dia manondro fa mahazo endrika vaovao entanin'ny modely Pro amin'ity fitaovana ity izy na eo aza ny tsy fisian'ny pad.
Ny bilaogy Japoney MacOtakara, no voalohany nizara ireto sary ireto ho toy ny fiheverana voalohany ny mety ho toetrany ny maodely vaovao an'ny AirPods ho avy. Amin'ity sary ity dia hitantsika izay mety ho vatan'ny iray amin'ireo AirPods sy ny faritra ambony amin'ny boaty famerenana izay hipetrahan'izy ireo.
Raha tsy misy antsipiriany bebe kokoa momba izany dia manohana ny vaovao natolotr'i Bloomberg de maninona afaka maneho hevitra isika eto. Tao dia voalaza fa Apple dia miasa amina modely roa vaovao an'ny AirPods, anisan'izany izay hahitana taranaka fahatelo izay hisolo ny maodely fidirana ankehitriny.
Ny famolavolana modely fidirana vaovao an'ny AirPods dia hitovy amin'ny an'ny AirPods Pro amin'izao fotoana izao, mampihena ny haben'ny tempoly sy ny pads ankehitriny. Apple koa dia mety miasa amin'ny fanatsarana ny fiainana bateria
Na dia nitovy tamin'ny AirPods Pro aza ny endrika dia tsy hanana toetra mitovy izy ireo. Anisan'izany, araka ny efa noresahintsika, ny fanafoanana ny tabataba, izay ho an'ny modely Pro an'ny headphone tsy misy tariby. Apple koa dia mety miasa amina modely vaovao boribory kokoa an'ny AirPods Pro hahafahan'izy ireo mifanaraka tsara amin'ny sofin'ny mpampiasa.
Avelanay ho anao ny rohy mankany amin'ireo sary sisa io 52audio dia afaka nizara ary mampiseho izay mety ho endrik'ity modely feno ity raha oharina amin'ny fampitahana habe amin'ny Pro.
Tsy fantatray hoe rahoviana no hamoaka ireo maodely AirPods vaovao ireo. Izay toa mazava sy mahita ny hetsika farany momba ireo Mac vaovao, Tsy ho mandritra ity taona 2020 ity ary hiandry ny taona manaraka isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Sary voalaza fa famolavolana ny famoahana AirPods 3
Sandoka amin'ny haben'ny trano izy io. Jerevo fotsiny ny tampon'ilay tranga AirPods mahazatra sy ny cas de pro misy an'ny Pro. Heveriko fa tsy nanao an'io botch io ry zareo.
Apple dia namoaka ny torolàlana ho an'ny famoronana ho an'ny MagSafe Accessories